❤️ Otu esi etinye akụkọ na Instagram - Winches Club
Ruo ugbu a, enwere mgbagwoju anya mgbe niile gbasara otu esi etinye akụkọ Instagram. Ọ bụrụ na ị biputere akụkọ mbụ gị nwa oge, ị nwere ike pịa + na foto profaịlụ gị wee tinye foto ma ọ bụ obere vidiyo na akụkọ gị.
Ma ozugbo i mechara nke ahụ, + na-apụ n'anya. Yabụ kedu ihe ị ga-eme mgbe ịchọrọ bipute akụkọ ọzọ ?
Daalụ maka mmelite Instagram ọhụrụ, E doziela okwu a ntakịrị. Ọ dị mfe ugbu a yana nghọta karịa ibipụta akụkọ, na e nwere isi ụzọ atọ:
Metụ akara + dị ka egosiri n'elu – naanị kwere omume maka akụkọ ọhụrụ
Wepu ozugbo na nzi ozi gị
Kpatụ akara ngosi igwefoto n'elu aka nri.
Instagram doro anya na ndị ọrụ ya kwetara, karịsịa ndị na-abụghị Ndị Instagrammer na-enwe mmasị, nwere nnukwu mgbagwoju anya. Ọ bụrụ na ịchọrọ nyocha ngwa ngwa nke usoro ọ bụla, lelee ntuziaka akụkụ atọ anyị n'okpuru.
Akụkọ Instagram sitere na foto profaịlụ
Nke a dị mma maka ikesa akụkọ ngwa ngwa, mana ọ na-arụ ọrụ naanị ma ọ bụrụ na ibipụtabeghị akụkọ gara aga n'ime awa 24 gara aga. Ị nwere ike iji usoro a site na ndepụta ma ọ bụ ibe profaịlụ gị.
Naanị pịa foto profaịlụ gị na akara +.
Ị nwere ike ịse foto ma ọ bụ vidiyo ma ọ bụ bulite otu.
Wee pịa akụkọ gị n'okpuru aka ekpe ga-ebipụta akụkọ gị.
Jiri mpịara aka nri bipute akụkọ
Ọ na-abụ ihe mgbe niile, mana ọbụrụ na ị maghị na ọ dị, o siri ezigbo ike ịchọta.
Naanị dọrọ ya ozugbo na ndepụta gị.
Were foto ma ọ bụ bulite ya na ụlọ akwụkwọ.
Kpatụ akụkọ gị n'okpuru aka ekpe a ga-ebipụta ya.
Bipute akụkọ site na ịpị igwefoto n'elu aka nri
Nke a bụ nnukwu atụmatụ ọhụrụ sitere na Instagram na ọ pụtara na ndị mmadụ nwere ike bipute akụkọ ugbu a n'ụzọ nwere nghọta karịa.. Ị nwere ike ime nke a site na post gị.
Site na post gị, dị nnọọ pịa akara ngosi igwefoto dị n'elu aka ekpe.
Họrọ onyonyo ma ọ bụ vidiyo ị ga-eji.
Pịa na akụkọ gị, a ga-ebipụta akụkọ gị
Uru nke ụzọ abụọ ikpeazụ dị na ndepụta ahụ bụ na ị nwere ike iji ha tinye foto ma ọ bụ vidiyo ọzọ na akụkọ gị, ọ bụrụgodị na i biputelarị otu. Usoro nke mbụ agaghị arụ ọrụ ma ọ bụrụ na ịnweela akụkọ Instagram Live Live.
Edemede gara agaKedu oge kacha mma biputere na Instagram ?
Akụkọ na-esoteKedu ihe kacha mma Instagram Bots na 2020 yana otu esi echekwa akaụntụ gị?